ဟုိုး.......... ရှေးရှေးတုန်းက တုို့တုိုင်း ဒါမျိုးတွေ ရှိဖြစ်ခဲတယ်
(၁) လွန်ခဲ့သော နှစ်နှစ်ဆယ်ကျာ်ကဖြစ်သည်..။ လမ်းစဉ်ပါတီအား (၂၆) နှစ် ဦးဆောင်ခဲ့သော နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင် (တချိန်က ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဟောင်းဖြစ်ခဲ့သူ) လမ်းစဉ်ပါတီဥက္ကဌကြီး ... ညီလာခံတွင် မိန့်ခွန်းပြောခဲ့သည်။ မိန့်ခွန်းပြောချိန်တွင် ... ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ စံနစ်အား ပြည်သူအများအာရုံစိုက်နေချိန်ဖြစ်သည်....။ လများမကြာမီ ၄င်းကိုယ်တိုင် အာဏာစွန့်လွှတ်လိုက်ရသော ပြည်လုံးကျွတ် အရေးတော်ပုံကြီး ပေါ်ပေါက်လာတော့သည်...။
လွန်ခဲ့သော ဆယ်နှစ်ခန့်က တိုင်းပြည်အား (၂၆) နှစ်တိုင်တိုင် အုပ်ချုပ်ခဲ့ဖူးသော ၄င်း ကွယ်လွန်ချိန်တွင် လိုက်ပါပို့ဆောင်သူမှာ လူဦးရေ နှစ်ဆယ့်ငါးယောက်ထက် မပိုခဲ့ပေ...။
(၂) လွန်ခဲ့သော နှစ်နှစ်ဆယ်ကျော်ခန့်ကဖြစ်သည်..။ လမ်းစဉ်ပါတီမရှိတဲ့နောက် .ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံကြီးဖြစ်ပွားဖြင့် .နိုင်ငံတော်အာဏာအား တပ်မတော်က ထိန်းသိမ်းပြီး န၀တ ဟုခေါ်သော အစိုးရ ပေါ်ထွက်လာသည်..။ န၀တ ဥက္ကဌမှာ .. ကာချုပ်ပင်ဖြစ်သည်..။ ၄င်းက ရိုးသားဖြောင့်မတ်သည်ဟု နာမည်ထွက်သည်..။ အာဏာသိမ်းပြီး နှစ်နှစ်အကြာ ရွေးကောက်ပွဲအပြီးတွင် တပ်မတော်မှ စစ်တန်းလျားပြန်ကာ အရပ်သားအစိုးရ သဘောအတိုင်းဖြစ်မည်ဟု ဆိုသည်..။
(၃) သို့သော်... ၄င်းထံမှ ဒုကာချုပ်က ထပ်မံအာဏာသိမ်းကာ ၄င်းအား အရူးအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့သဖြင့် ...။ နှစ်ပေါင်းများစွာ အကျယ်ချုပ်ကျပြီး အရူးဘ၀ဖြင့် ကွယ်လွန်ခဲ့သည်...။ ၄င်းထံမှ အာဏာသိမ်းခဲ့သော ဒုကာချုပ်မှာ ကာချုပ်ဖြစ်လာပြီး န၀တ အား နအဖ အဖြစ် ပုံဖော်ကာ အမျိုးသားညီလာခံကို ဆယ်နှစ်ကျော်ကြာ ကျင်းပပြီး ဒီမိုကရေစီဖော်ဆောင်ရေးကို နှေးကွေးစွာ အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည်..။ ရလာဒ်အဖြစ်.. အနောက်အုပ်စု၏ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်ခြင်းနှင့် တရုတ်၏ ဗိုလ်ကျမှု၊ အဂတိလိုက်စားမှုတို့ကို ပြည်သူအများ ဆင်းရဲဆိုးဝါးစုတ်ပြတ်စွာ ခံစားခဲ့ရသော်လည်း
၄င်း၏ ဆွေမျိုးနီးစပ်များ၊ အသိုင်းအ၀ိုင်းများမှာ ဘီလျံနာများ အဖြစ် ကောင်းစားခဲ့သည်..။
(၄) လွန်ခဲ့သော ဆယ်နှစ်ကျော် ..
နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာ၏ ကင်မရာမင်းများ၊ ၀န်ထမ်းများ ပျာယာခတ်နေကြသည်..။
နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတစ်ဦး တိုင်းတပါးသွားမည်ဖြစ်သဖြင့် အလုပ်များနေကြသည်..။
သက်ဆိုင်ရာ လုံခြုံရေးများ .. ဗျာများနေကြသည်...။ သေနတ်အသင့်ဖြင့် မနက်မိုးမလင်းခင်ကတည်းက နေရာယူထားကြသည်...။
နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာမှ သတင်းယူရန် စောင့်ဆိုင်းနေသည်..။ ဓါတ်ပုံရိုက်သံများ တဖြတ်ဖြတ်ဖြစ်နေသည်..။
လာပါပြီ...။ ကားနက်ကြီးပေါ်မှ... နိုင်ငံတော် အစိုးရအဖွဲ့ အကြီးအကဲ တစ်ဦး ဆိုက်ရောက်လာပြီဖြစ်သည်..။ ထူးခြားသည်က ၄င်းအား လိုက်လံဝန်းရံပို့ဆောင်သူများမှာ စစ်ယူနီဖောင်းများဖြင့်ဖြစ်သည်..။
လေယာဉ်ပေါ်တက်ကာ တံခါးဝတွင် အားလုံးကို တာ့တာ ပြကာ. လေယာဉ်အတွင်းဝင်သွားသည်..။
မကြာမီ လေယာဉ်တံခါးပိတ်သွားပြီး လေယာဉ်ကြီး ကောင်းကင်ပေါ်သို့ ထိုးတက်သွားသည်...။
ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင် .. ထို .. နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲ .ပြန်ရောက်လာသည်...။ လေယာဉ်ပေါ်မှဆင်းပြီး ........... များမကြာခင်အချိန်တွင် ... ၄င်းအား .... လာရောက်ကြိုဆိုသူများနှင့်အတူ...၄င်းသည်. .စစ်ကြောရေးစခန်းသို့....။
၄င်းအား ပြည်သူအများ ဂရုဏာမသက်ခဲ့ကြ။ သို့သော် တီဗီထဲတွင်ခဏခဏပါလေ့ရှိဖူးသော ထိုမင်းသားအား ပြောစမှတ်ပြုကြလေသတည်း....။
များမကြာမီ .. ၄င်း ပြန်လွတ်လာသည် ....။ သို့သော် ..ဆွေမျိုးနှင့် တပည့်တပန်းများမှလွဲပြီ .. လာရောက်ကြိုဆိုသူ မရှိပေ...။
(၅) လွန်ခဲ့သော ငါးနှစ်ကျော် ခြောက်နှစ်ခန့်ကဖြစ်သည်..။
မြန်မာနိုင်ငံမှ နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်တစ်ဦးဖြစ်သော ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းတစ်ယောက် ဆေးကုသမှုခံယူနေသည်...။ ၄င်းအား ကမ္ဘာ့ဆေးပညာထိပ်တန်းနိုင်ငံဖြစ်သော အမေရိကန်သို့ သွားရောက်ကုသရန် စင်ကာပူရှိဆရာဝန်များက အကြံပေးသော်လည်း
ထို့ကြောင့် ၄င်း၏ အမွှာဖြစ်သူနှင့် သွေးချင်းလဲကာ ကုသရင်းဖြင့် နှစ်ဦးစလုံး ကွယ်လွန်ခဲ့သည်..။
ကွယ်လွန်ချိန်သည် ၄င်း တာဝန်ထမ်းဆောင်ဆဲဖြစ်သော်လည်း ၄င်း၏ နောက်ဆုံးခရီးအား ပြည်သူအများ လုံးဝ စိတ်မ၀င်စားခဲ့သလို
မည်သည့်နေရာတွင် ဈာပန ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း ပြည်သူအများ မသိခဲ့ကြပေ..။
ထူးခြားသည်က ထိုသူသည် နိုင်ငံအကြီးအကဲမဖြစ်ခင် တိုင်းမှူးဘ၀က လူထုက ရိုသေလေးစားအားပေးသော အတိုက်အခံပါတီခေါင်းဆောင် အမျိုးသမီးကြီးနှင့် ၄င်း၏ပါတီဝင်များ မဲဆွယ်ခရီးစဉ်အပြန်တွင် ပိတ်ဆို့ရိုက်နှက်ကာ ပြည်သူအများကို စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်စေသောကိစ္စအား နောက်ကွယ်က ကြိုးကိုင်သူအဖြစ် နာမည်ကြီးသူတည်း..။
(၆) လွန်ခဲ့သော နှစ်နှစ် ခန့်ကဖြစ်သည်..။ လျှပ်စစ်မီးအပြည့်မရသော ပြည်သူအား မထေမဲ့မြင်ပြုကာ တရုတ်ပိုင် မြစ်ဆုံစီမံကိန်းများအား မည်သူတားတား ဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြည်သူ့ဆန္ဒကို အန်တုကာ ကြေညာခဲ့သော ၀န်ကြီးတစ်ဦးခမျာ ..ထိုစီမံကိန်းကြီးတား တားမြစ်ခံခဲ့ရသလို သူ့ခမျာမှာလည်း ရာထူးမှ ထုတ်ပယ်ခြင်းခံလိုက်ရသည်..။ ထိုဝန်ကြီးသည်ကား ထိုစီမံကိန်းများကို ခရိုနီများနှင့်ပေါင်းကာ မီးရောင်းစားနေသူဖြစ်ပြီး ပြည်သူအများကို ဖယောင်းတိုင်ထဲတွင်ထားချင်သူ ဗိုလ်မှူးကြီး အငြိမ်းစားတစ်ဦးဖြစ်သည်တကား....။
(၇) အဆင့်မြင့်နည်းပညာများ ပွားများတိုးတက်ခေတ်မီလာသော ယနေ့ခေတ်တွင် နည်းပညာကို ဘောင်ခတ်ကာ မည်သည့်နိုင်ငံတကာကုမဏီများကို မှ ၀င်ခွင့်မပေးပဲ ပြည်တွင်းရှိ နည်းပညာကုမဏီမဟုတ်သော ခရိုနီများနှင့် ငါးနှစ်စီမံကိန်းချကာ ပြည်သူ့ထံမှ မိုဘိုင်းဖုန်းအလုံးရေ သန်း(၃၀) စီမံကိန်းဖြင့် နှစ်ရှည် တစ်ဦးတည်းလက်ဝါးကြီးအုပ် အမြတ်ထုတ်မည့် ဌာနဆိုင်ရာဝန်ကြီးတစ်ဦး ပြုတ်သွားသည်...။
၄င်းပြုတ်သွားသဖြင့် ပြည်သူအများက သြဘာပေးကြသည်..။
ထိုသူသည်လည်း နည်းပညာအကြောင်း နကန်းတလုံးမှမသိသော ..
ဒီနေ့ စင်ပေါ်ရောက် .....
နောက်နေ့ ချေးတွင်းထဲ ရောက်သော ဇာတ်လမ်းများကို . ...
ပြည်သူ့ကျိန်စာ မိနေသော ယူနီဖောင်းဝတ်များဟုရွေ့သာ...................။
လက်ညိုးညွှန်ရာ ... ရေဖြစ်ခဲ့ကြသည်...။
တပ်မတော်ဟုသော ဂုဏ်ပုဒ်နှင့် ကာဗာယူခဲ့ကြသည်..။
ဂရုဏာ သက်သူမရှိ ...။
ဘ၀ နှင့် အသက် နိဂုံးချုပ်ခဲ့ကြသည်...။
လွတ်လပ်ရေးရပြီး မြန်မာ့သမိုင်းတွင် ပြည်သူ့ဆန္ဒကို ဂရုမစိုက်ပဲ .. တိုင်းပြည်အာဏာကို စွက်ဖက်ချယ်လှယ်ခဲ့သော...
မည်သည့် ကာချုပ်၊ မည်သည့် ဗိုလ်ချုပ်မှ .... သမိုင်းကြောင်း ... မကောင်း .. ဇာတ်သိမ်းမလှ ခဲ့ပေ...။
နံပါတ် (၃) တစ်ယောက် ကျန်နေပါသေးသည်...........။
သူလည်း ဘယ်နေ့ ပြည်သူ့ကျိန်စာ ထိမည် ... မသိပေ...။
ပေးပို့တင်ပြသူ အာလူးလေး at 9:17 AM Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook